मलाइका १२ वर्ष कान्छा प्रेमीसँग बिहे गर्दै? – HKNepal.com – हङकङबाट सञ्चालित पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
मलाइका १२ वर्ष कान्छा प्रेमीसँग बिहे गर्दै?
मुम्बई: बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोरा अभिनेता अर्जुन कपुरसँगको अफेयरका कारण चर्चामा छिन्।
कतिपय सञ्चारमाध्यममा उनीहरूबीच चाँडै नै विवाह हुने खबर यसअघि नै आएको थियो ।
उता अरवाज पनि रोमानियाकी सुन्दरीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा छन् । उनीहरूले पनि चाँडै विवाह गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । मलाइका अर्जुनसँगै खुलेरै देखिएपछि उनीहरूबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको बताइन्छ । तर, उनीहरूको जोडी नमिलेको भन्दै धेरैले खिल्लीसमेत उडाएका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ।
यस्तो अवस्थामा पक्राउ परे केन्याको डान्स बारबाट १२ नेपाली युवती
नेपाली नयाँ बर्ष २०७६ को उपलक्ष्यमा घरबारबिहिनलाई नेपाली खाना वितरण